musha NYAYA DZEEEOPEAN Laurent Koscielny Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeGenius Anodzivirira anozivikanwa nezita; "Bosscielny". Our Laurent Koscielny Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yeupenyu hwake musati mazita, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hungu, munhu wese anoziva nezvekutsinyera kwake kudzivirira kodzero asi vashomanana vanofunga nezveRevography yaLaurent Koscielny iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Laurent Koscielny Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Laurent Koscielny akaberekerwa musi we 10th weSeptember 1985 muTulle, guta rechitatu guru pane iri muRimousin nzvimbo yeFrance uye nzvimbo isina kunaka kutamba bhora, uye zvinowanikwa zvakanyanya kune vagari varo. Laurent Koscielny akaberekerwa Mr naMnu Bernard Koscielny avo pamwe chete nemwanakomana wavo vane nyika dzePoland.
Laurent akakurira mumhuri yekumigodhi muTulle, guta riri pakati nepakati peFrance, nzvimbo uko kusina maturo kunoguma kana kune bhora kumakumbo. Nyaya yehuduku hwake inofadza, kana isingawanzove - iyo ye mukomana muduku ane rag kuhupfumi nyaya uyo akave akaropafadzwa ane tarenda inoshamisa. Laurent panguva yehuduku hwake nguva yakanga ine chido chakasimba chokuita kuti kurota kwake kuzadzike. Zvido zvake zvaisava kungofamba. Laurent akafanana nehobhoza akauya, nekuda kwehanzvadzi yake yakasungirirwa asi haana kumboita mumutambo.
Mumashoko ake ..."Pfungwa yekutamba semupiki wemhizha yaingova kungorota chete, rudzi rwekufungidzira mwana wose wezera rangu aigona kutarisira. Panguva iyoyo, chinhu bedzi chandakanga ndichifunga nezvazvo ndechekutamba bhora, kutamba uye kutamba zvakare. Kunakidzwa neni, kuva neshamwari dzangu nekugovana nguva yakanaka navo. Kutamba bhora ndiko kwandaiva nehanya nazvo, kufanana nevana vakawanda vezera rangu vaizove.
Laurent Koscielny Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Career in Summary
Laurent akatanga basa rake mu2004 na Guingamp, boka raive rakagadzira matarenda akadaro Didier Drogba uye Florent Malouda. Akatanga basa rake roumhizha sechanza chakanaka zvakare uye zvakatora makore matatu chete asati asvika simba rekuverenga. Laurent akashandisa basa rakawanda, zvibairo, uye kukanganisa zvakamuita kuti aendeswe kuGuangamp mukuru wevarwi apo akashandura kubackback. Pakarepo apo Laurent aiva nemakore 18, akatanga kuchengeta mari kuti azviriritire ini nemhuri yangu. Akazofambisa mapoka eFrench League sezvaaifamba kuTours naLorient, achibatsira kuti gare gare vawedzere kukurudzirwa kuFrance pamusoro pebhokisi rekufambisa.
Yakanga iri yaLaurent yakashata yekudzivirira nzira iyo yakakwezva Arsenal uyo akasimbisa kusayina kwake 7 July 2010. Dare reArsenal rakasimbisa chibvumirano asi Arsene Wenger aisagona kupa chibvumirano chekupedzisira nokuti chaiva kuSouth Africa uye akasiyira foni yake kumba. Yakanga iri nguva Koscielny akakonzera mhirizhonga semapepanhau eFrance akaudza kuti akaenderera mberi kunodzidzisa neavo vaArsenal vaifambidzana navo pasina chiziviso chake chekutumira uye kugadzirisa kupedzisa naWenger. Akazogadzirisa uye akapiwa chikwata chekambani 6 shati, yakambotambiswa naFiripi Senderos, uyo akanga atamira kuFulham.
Laurent Koscielny Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pane chirevo chokuti chimwe chikamu chakanaka chebasa chinoda munhu akakodzera munzvimbo yakakodzera uye panguva yakakodzera. Zvechokwadi, munhu waRaurent Koscielny ari pamusoro-famba ane hupenyu husina hupenyu hwave huchigadziriswa nekanaka uye anogara kwenguva refu musikana Claire Beaudouin.
Vose vanodikanwa vakaroora mugore re2015 nevakawanda veArsenal neFrench vechechi varipo.
Kunyange zvazvo mutauro weFrance wakaita sewakanyanya kufarira Raphael Varane's muchato wakaitika musi iwoyo. Koscielny haana kubvumira chisviso cheFrance kuti atore mifananidzo yemhemberero yake yemuchato. Tinogona kungofungidzira kuti Koscielny akaronga kutengesa mifananidzo yavo seimwe yevashomanana kuzotumirwa paIndaneti kubva kuna Bacary Sagna mudzimai weLauine.
Laurent naClaire vane vana vaviri vakanaka mumazita; Maina naNowa Koscielny vanofananidzirwa pasi nebaba vavo. "Vana vangu vakandibatsira kuti ndifambe mberi muupenyu". anoti, Laurent.
Mushure mekudzidzisa kwake, Laurent anoda kuenda kundotora vana vake kuchikoro uye anovatevera kusvikira pakupedzisira kwemasikati apo mudzimai wake anodzoka kubva kubasa.
Laurent Koscielny Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Family Facts
Kutanga nevemumhuri yake, sekuru vaKoscielny vaiva Polish. Akaenda kuNorthern France kuzoshanda semugove wemuPolish. Zvinosuruvarisa, nokufamba kwenguva iye nevamwe vemhuri yake vakarasikirwa mutauro wePolish uye midzi.
Baba vaLaurent vaitamba mumutsara wechina weFrance football kumapoka akawanda asati ava maneja. Koscielny akarumbidza baba vake, Bernard kuburikidza nekumuchengeta pasi pasi uye kumubatsira nguva dzose kuyeuka kwaakabva uye kuti aifanira kuramba akatendeka sei kumidzi yake. Baba vake vaibatsira zvikuru Mumwe munhu ainyatsonzwisisa nyika yebhola. Sezvakataurwa naKoscielny, ..."Aiziva zvaizoitika dai ndisina kuchengeta tsoka dzangu dzichidzika. Nemafaro, nguva dzose aigara akatarira kwandiri uye aigara aripo kuti andipa zano pamusoro pezvisarudzo zvandaida kuita. Ndinofunga kuti ndave ndine rombo rakanyanya. Ndakagamuchira dzidzo yakanaka kwazvo, kubva kuvabereki vangu nehanzvadzi dzangu. Vose vakandidzidzisa mitemo inokosha. Uye nhasi, ndiyo nguva yangu yekuendesa iyo kuvana vangu. "
Amai vaLaurent Koscielny vakagara vari shure kwake kuti vatsigire amai. Uye nanhasi, iye aripo chaizvo muupenyu hwake. Sezvaanotaura: "Iye uye uye nguva dzose ave ari munhu anokosha muhupenyu hwangu uye hupenyu hwangu: mutumwa anochengetedza". Iye ane hama yebhola yebhola ane makore 10 akakura kupfuura iye uye akambotamba mumitambo yeamateur.
Laurent Koscielny Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Laurent Koscielny ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Laurent Strengths: Iye Akatendeka (zvose kambani nemudzimai), akachengetedzwa, akaongorora, anoshingaira uye anoshanda chaizvo.
Laurent's Weaknesses: Kunyara, kunogona kunetseka pamusoro pezvinhu, kunyanya kuzvitsoropodza iwe nevamwe uye ndeye basa rose uye hapana munhu anotamba.
Zvakaita Laurent: Anofarira mhuka, zvokudya zvine utano, mabhuku, zvisikwa uye kuchena kwakakwana.
Zvinorehwa naLaurent: Kunyengera, kukumbira rubatsiro uye kutora nzvimbo yepamusoro.
Laurent mumwe munhu uyo ​​anogara achicherechedza zvinhu zviduku zvikuru uye pfungwa yake yakadzika yevanhu inoita kuti ave mumwe wevanhu vakangwarira iwe wati wamboziva. Nzira yake yekutarisa kuhupenyu inovimbisa kuti hapana chakasara kune chingaitika. Laurent mumwe munhu anogona kunge asinganzwisisiki, kwete nokuti haakwanisi kutaura, asi nokuti haazobvumi manzwiro ake seechokwadi, echokwadi, kana kunyange akakosha kana asinganzwisisi.
Laurent Koscielny Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ushamwari
Kutanga kweAssenal basa rake kwakanga kusina kunaka. Zvisinei, haina kutora nguva refu Arsene Wenger akada murudo hwake hwepanyama uye kubvira ipapo, Laurent akazvidzidzira kumunhu anonyanya kutungamirira.
Laurent Koscielny Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Q & A Session
Laurent akapindura mimwe mibvunzo yeAQ inokosha yekuziva nezvazvo. Zvinotevera pasi apa mibvunzo uye mhinduro dzake.
ani ndiye mutambi wakaoma kwazvo wawakambosangana nawo mumutambo?
Drogba, pasina kubvumira.
Ikoko / chii mutambo wakamboona rebackback yako yakakura here?
Kupedzisira kweEuro muFrance. Yaiva nguva yakaoma kwatiri. Nokuti iyi yaiva chiitiko icho munhu wose aitarisira muFrance. Ndinofunga kuti zvakakwana zvaive kubudirira, asi kuguma nokukundwa kwakanga kunorwadza zvikuru. Pane nguva dzose kunzwa kunorwadza kwekupedzisa chiitiko chakadai nenzira iyi nenzira iyo.
apo iwe uri kuda kuenda kumunda, iwe unofungei pamusoro?
Pandinopinda musango, handifungi zvakanyanya pamusoro payo, kana tatoitwa nemaoko, tinoedza kuisa pfungwa dzedu pamutambo wangu uye chete pamutambo wangu, kuti ndiyeuke nezvezvinhu zvandinofanira kuita panguva yemutambo, ndinoedza kupa zvakanakisisa zveboka rangu, kuti ndive nemugumisiro wakanaka.
CHOKWADI KUTI: Tinoonga nekuverenga yedu Laurent Koscielny Childhood Indaba pamwe untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!